Ọ bụghị ezigbo echiche ịzụta Mac ugbu a | Esi m mac
Ọ bụghị ezigbo echiche ịzụta Mac ugbu a
Isiokwu a bụ ihe onye echiche na update oge maka Macs, ọ bụghị ihe ukara si Apple, anya site na ya. Ozugbo emechara nke a ka m kwuo, m ga-ekwu na ọ na-arụ ọrụ maka ụbọchị nke anyị nọ ugbu a nakwa na ọ ga-agbasa n'echiche m ruo ọnwa nke ọnwa June mgbe anyị ga-edo anya nke ọma ihe ụmụ okorobịa si Cupertino na-aga. nye anyị. N’okwu edemede ikpeazụ a nke ọnwa Machị ebe eweputara iPhone SE na 9,7-inch nke iPad Pro, Echere m na Apple ga-eju anyị anya na obere 12 ″ MacBook na-eme ememme iji cheta ụbọchị ncheta mbụ ya, mana ọ bụghị.
Ọ dịghị nke a mere na isi na Macs bụ nke pụtara ìhè site na enweghị ha, mana n'echi ya asịrị na ọhụrụ MacBooks pụtara ìhè. Apple ewepụghị nkwa ọ bụla na Macs anyị hụrụ n'anya, mana asịrị rutere awa ole na ole ka nke ahụ gasịrị, ọ bụ ya mere m ji chọọ ịkọrọ m echiche m banyere aha ahụ kwuru: ọ bụghị ezigbo echiche ịzụta Mac ugbu a.
Ogologo Mac dum dị ugbu a na usoro mgbanwe, ma ọ bụ n'ihi ndị na-arụ ọrụ ya ma ọ bụ ọbụna n'ihi ohere nke ịhụ mgbanwe mgbanwe mara mma. Apple nọnyeere Macs ogologo oge ka anyị maara ha taa ma ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ha nwere atụmatụ mara mma, afọ a ha nwere ike gbanwee ma ọ bụ tinye ihe na Macs ọhụrụ ha.Ma nke a bụ ihe nwere ike ịnọgide na ndabere kemgbe ihe dị mkpa n'ezie bụ ngwaike dị n'ime na nke a bụ ihe na-aga ịgbanwe.
Inwetụ ntakịrị ụbọchị Apple wepụtara ma ọ bụ emelitere Macs bụ ihe ndị a: iMac n'October ikpeazụ nke 2015 (ya na Retina agbakwunyere nke 21,5 ″) na nke a nwere ike ịbụ naanị Mac anyị nwere ike ịtụle ịzụta ugbu a, MacBook Pro na Mee 2015, MacBook 12 ″ n'April nke otu afọ ahụ , anyị nwere ike ịrara otu isiokwu maka MacBook Air, otu Mac mini na Mac Pro ma ọ bụ MacBook Pro na-enweghị Retina ngosi bụ akụkọ ọzọ.
Nke ahụ kwuru, ihe niile doro anya Ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ inwe ịzụta Mac site na mkpa ma ọ bụ n'ihi na ịchọtara ya ọnụahịa ya nke ọma, gaa n'ihu ya, Ebe ọ bụ na Macs dị ugbu a bụ igwe dị ike na ịzụta dị mma, mana ọ bụrụ na ịnwere ike ịnara ndụmọdụ m bụ ịme ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ọ bụghị ezigbo echiche ịzụta Mac ugbu a
Ọfọn, azụrụ m MacBook Ikuku ọnwa abụọ gara aga… Gaa chafa
Zaghachi iji nyocha
Ndewo Surce, ịzụta Mac na-adị mma mgbe niile ma ejiri m n'aka na MacBook Air a ga-enye gị ọtụtụ ọysụ. Ihe m na-achọ ikwu bụ na ndị ọrụ na-ezube ịzụta Mac na achọghị ya ngwa ngwa, ọ ka mma ichere maka ụdị ndị ọhụrụ ahụ.
Macs ọhụrụ ndị a nke m na-ekwu maka ntụgharị uche nwere ike ịbata na June ma ọ bụ Ọktọba, yabụ ịzụta Mac ugbu a abụghị ịzụta dị njọ, dị anya na ya
Miskọwahiela isiokwu ahụ ebe ọ bụ na ekwuru na Mac ọ bụla dị mma mana ọ bụrụ na ịnwere ike ichere iji oge ọkọchị ahụ ka mma. MacBook Ikuku na-arụ ọrụ dị ukwuu
Ndewo kart, mgbe m gụsịrị isiokwu gị n'afọ gara aga, m na-akpọtụrụ gị n'ihi na m nwere mmasị n'ịzụrụ ikuku macBook na site na ihe m gụrụ na ọ ka mma ichere m. N'ihi gịnị? Onwere ihe dị mma karịa sentimita iri na atọ ga-apụta? Enwere m olileanya na ị nwere ike inyere m aka.